အပျေါကမနခေငျြသူ – MM Republic
နငျကလဲ မောနပွေီလား၊ လုပျပါအုံးဟ၊ ငါဒီမှာကောငျးတုနျး” လုပျနရေငျး တနျးလမျး သူ့ကိုယျပျေါပိကလြာသော ကိုရဲနောငျကို လှမျးဖကျရငျး ခငျမာရီကပွောလိုကျသညျ။ ခု နောကျပိုငျး ခငျမာရီ နှငျ့ သူ ဒီကိစ်စ အပေးအယူ တညျ့နသေညျ။ သူ့ မိနျးမနှငျ့ လားလားမှ မတူ။ ခငျမာရီက ဒီကိစ်စ စိတျပါသညျ။ သူနှငျ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရှိသညျ။ ဒါကို ကိုရဲနောငျကလဲ ကွိုကျသညျ။ သူ့ မိနျးမဆီက မရသညျ့ အရာကို ခငျမာရီဆီမှ အပွညျ့အဝ ရနသေညျ။ “မောတယျဟ၊ ငါဒီမှာ မနားတမျးလုပျနတော ဘယျလောကျကွာပွီလဲ၊ သရေောပေါ့၊ ခန နားအုံးမယျဟာ၊ နငျမစောငျ့နိုငျရငျ ငါ့ အပျေါက တကျလုပျ” ကိုရဲနောငျက ပွနျပွောသညျ့ လသေံကိုက မောသံပေါကျနသေညျ။ မမောခံနိုငျရိုးလား၊ အောကျက ဇိမျယူနသေညျ့ ခငျမာရီက တအအ နဲ့ ကောငျးလိုကျတာ လုပျလုပျ ဆိုပွီး သူကောငျးနတေိုငျး အားမနာတမျး လုပျခိုငျးနတောမို့ ကိုရဲနောငျက မနားတမျးဆကျတိုကျဆျောနရောမှ မတတျနိုငျတော့။ ကိုရဲနောငျက သူ ခကျြခွငျး မပွီးနိုငျမှနျး သူ့ကိုယျသူ သိသညျ။ စောစောက ခငျမာရီ အစုတျကောငျးသဖွငျ့ သူ့ ပါးစပျအောကျမှာ တခြီ ပွီးထားပွီးပွီမို့ ခု တခြီ အခြိနျကွာမယျမှနျး သူ့ကိုယျသူ သိနသေညျ။
“ဟာ နငျ့အပျေါက မလုပျခငျြပါဘူး၊ ငါက အောကျက ခံရတာ ပွိုကိုကျတယျ၊ နငျ့အပျေါတကျလုပျတာ ငါ့ခွထေောကျညောငျးတယျ” “ကဲ အပျေါက မလုပျခငျြရငျ ကုနျးပေး၊ ငါနောကျကနေ လုပျပေးမယျ၊ ဒါဆို ငါ သိပျမမောဘူး” “အာ ယောကျဖကလဲ ငါက အောကျက ဇိမျနဲ့ ခံခငျြနပေါတယျဆိုမှ လာပွောနတေယျ။ မနကေ့ နငျ့ အကွိုကျ အကုနျ ငါလုပျပေး ပွီးပွီ၊ ဒီနေ့ နငျ့ အလှညျ့” “အေး ဒါဆို ငါ ခန နားအုံးမယျ။ ငါလဲ မောတာပေါ့ဟ၊ ငါသိတယျ နငျစောစောက ကောငျးတယျ ကောငျးတယျနဲ့ တခါပွီးသှားသေးတယျမို့လား” “အငျး၊ ပွီးပမေဲ့ ခံလို့ မဝသေးဘူးဟာ၊ ပွီးတော့ နငျက ဆကျလုပျနတောနဲ့ ပွနျတကျလာတာ ခုကောငျးနတေုနျး ရှိသေးတယျ နငျက ရပျလိုကျတာ၊ ဖီးတောငျအောငျ့သှားတယျ” “ဖီးလျ မအောငျ့အောငျ ငါ့ ဟာ သှငျးထားတာဘဲ၊ နငျငါ့ကို သခြော ခှထားလေ” “ခှထားတာဘဲ”
“ကော့ပွီး နငျ့ခွထေောကျနဲ့ ငါ့ကို သခြောညှပျထားလေ နငျ့ဟာနဲ့ ငါ့ဟာ ကပျနအေောငျညှပျ” ကိုရဲနောငျအပွောကွောငျ့ ခငျမာရီက ကော့ရငျး သူ့ ခွနှေဈခြောငျးကို သခြောတငျးနအေောငျ ကိုရဲနောငျ ခါးကို ညှပျလိုကျသညျ။ ဒီတော့မှ သိသိသာသာ ကိုရဲနောငျပစ်စညျးက ခငျမာရီ ကိုယျထဲ တိုးဝငျသှားသလို ဖွဈသှားသညျမို့ “ဟား . . . ကောငျးလိုကျတာ ယောကျဖရာ၊ ခုမှ အတှငျးကို သခြောထိတယျ၊ အဲလို အစကပွောပါလား၊ နငျလဲ နဲနဲဖိခပြေး” “ပွောစရာလိုလားဟ၊ နငျသိရမှာပေါ့။ ကဲ ကဲ ဒီလောကျဘဲ ဖိလို့ရမယျ၊ နငျလဲအတငျးကော့လေ” အပေးအယူမြှမြှနှငျ့ ကိုရဲနောငျက ဖိ၊ ခငျမာရီကကော့ခံကာ အားကုနျဖကျရငျး နှဈယောကျသား ခနမြှ တိတျသှားသညျ။ ခနကွာတော့မှ ခငျမာရီက တအားကုနျဖကျထားသညျကို လြှော့ခရြငျး သကျမခကြာ “ဟူး . . ငါတော့ ဒုက်ခပါဘဲ ယောကျဖရာ၊ နငျမကောငျးဘူး” “ဟ ငါက ဘာမကောငျးတာလဲ” “နငျလဲမကောငျးဘူး၊ ငါလဲ မကောငျးဘူး။
စားကောငျးတိုငျး စားနကွေတာ” “စားကောငျးလို့ စားတာ မကောငျးစရာလားဟ၊ ကဲ ငါ အမောပွပွေီ၊ အလုပျပွနျစမယျ” “ငါ ကွနေပျနပွေီဟ၊ နငျ နားခငျြ ခန ထပျနားအုံးလေ” “မနားတော့ဘူး၊ ဒီထကျပိုနားရငျ ငါ့ဟာပြော့သှားတော့မယျ” ကိုရဲနောငျက ပွနျပွောရငျး ခငျမာရီ ကိုယျပျေါမှ ထကာ ပေါငျကွားထဲ ကကြနြန ဝငျထိုငျလိုကျသညျ၊ ခငျမာရီက ပေါငျကို ကားပေးရငျး ခွထေောကျကို မွှောကျကာ သူ့ခွထေောကျကို ကိုရဲနောငျ ပခုံးပျေါ လှမျးတငျလိုကျသညျ။ ကိုရဲနောငျကလဲ အလိုကျသငျ့ ခငျမာရီ ပေါငျကို လှမျးဆှဲကာ စောစောက အထမှာ ပလှတျကနဲ ကြှတျသှားသော သူ့ ပစ်စညျးကို လကျဖွငျ့ထိမျးကာ စိုရှဲနသေော ခငျမာရီ ကိုယျထဲ ရှလှတျကနဲ ပွနျထိုးထညျ့ရငျး အစမျး တခကျြခပျပွငျးပွငျးလေးစမျးဆောငျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။
“အ” ခငျမာရီထံမှ အ ကနဲ အသံတခကျြထှကျလာသညျကို ပွုံးကွညျ့ရငျး “ကောငျးလား” ခငျမာရီက ပွနျမဖွဘေဲ သူ့ပေါငျကို ဆှဲထားသော ကိုရဲနောငျ လကျကို လှမျးရိုကျသညျ။ ကိုရဲနောငျက ပွုံးရငျး ကြှတျသှားအောငျ ဆှဲထုတျလိုကျ၊ ဇှပျကနဲ ပွနျထိုးသှငျးလိုကျနဲ့ ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျ လုပျကစားနသေညျ။ ဆောငျ့ဆောငျ့သှငျးလိုကျတိုငျး ခငျမာရီ က တအအ ဖွငျ့ ဖွဈနသေဖွငျ့ “ကောငျးလားဆို” ကိုရဲနောငျက ထပျမေးလိုကျသညျ။ ဒီတော့မှ ခငျမာရီက လသေံတိုးတိုးဖွငျ့ “ကောငျးလှနျးလို့ ခကျနပွေီ ယောကျဖရာ၊ လုပျပါဟာ၊ နငျကလဲ ငါကောငျးနပွေီဆို ဒီလိုဘဲ” ခငျမာရီ အပွောက ထနျစရာမို့ ကိုရဲနောငျ မထိမျးနိုငျတော့။
တဖတျဖတျနဲ့ ဂှေးရိုကျသံ ဆကျတိုကျပျေါလာသလို ခငျမာရီဆီမှလညျး တအအ နှငျ့ အ သံဆကျတိုကျထှကျလာလတေော့သညျ။ ကိုရဲနောငျ အိမျထောငျသကျတမျးက ၂ နှဈနီးပါးရှိပွီဖွဈသညျ။ အိမျထောငျကစြကတညျးက သူ့ မိနျးမ တငျမာရီက ဒီကိစ်စကို စိတျမပါသလို တကျတကျကွှကွှလညျး မရှိ။ ခဈြသူရီးစားဖွဈကာ ယူထားသညျ မဟုတျဘဲ၊ လူကွီးခငျြး သဘောတူကာ ပေးစားထားသဖွငျ့ သူ့မိနျးမ ရှကျနသေညျဟုသာ အစက အောကျမမေိ့သညျ။ တစတစ နှငျ့ ကွာလာသျောလညျး တငျမာရီက က ထူးမလာခြေ။ ကိုရဲနောငျက သူ့မိနျးမလညျး သူ့လို ဒီကိစ်စတှငျ တကျတကျကွှကွှ ဖွဈစခေငျြသညျ။ ကိုရဲနောငျက မိနျးမပှသေူ မဟုတျသျောလညျး ထိုကိစ်စတှငျ ယူထားသညျ့ မိနျးမ နှငျ့ စိတျတူကိုယျတူ ဖွဈစခေငျြသညျ။
ယခု တငျမာရီက ထိုသို့ မဟုတျ၊ ထိုကိစ်စကလှဲပွီး ကနျြ အိမျမှု့ကိစ်စ အားလုံး နိုငျနငျးသညျ။ သူ့ ဝယြောဝစ်စ မှနျသမြှ လိုလသေေးမရှိ။ ကိုရဲနောငျကလဲ ထိုကိစ်စ သူ့မိနျးမ စိတျပါလာအောငျ အမြိုးမြိုး ဆှဲဆောငျသညျ။ သို့သျော ညဘကျ သူအနားကပျကာ သူ့မိနျးမ ကို ဖကျလိုကျသညျနှငျ့ တငျမာရီ ခန်တာကိုယျက တောငျ့တငျးနလေပွေီ။ ကိုရဲနောငျ အနမျးကို မကျြစိစုံမှိတျကာ ခံသညျ။ ကိုရဲနောငျ ပွုသမြှ အံကြိတျကာ ခံသညျ။ တုနျ့ပွနျမှု့ဆိုသညျမှာ ဝလောဝေး။ ကိုရဲနောငျက အတတျနိုငျဆုံး သိမျသိမျမှမှေ့ေ့ နညျးလမျးပေါငျးစုံကို သုံးကာ တငျမာရီကို စညျးလုံးသညျ မရ။
လကျမထပျခငျက တငျမာရီတှငျ ခဈြသူရီးစား ရှိခဲ့ကာ သူ့ကို လကျမခံခငျြဟု ထငျမိကာ နောကျကွောငျးကို စုံစမျးသညျ။ တငျမာရီတှငျ မညျသညျ့ ယောကျကြား အတှအေ့ကွုံမြှ မရှိ။ မညျသညျ့ အတှကျကွောငျ့ တငျမာရီ ဒီကိစ်စကို စိတျမဝငျစားသညျကို ကိုရဲနောငျ နားမလညျသလို ဖွဈနသေညျ။ တငျမာရီ ပုံစံကား ခု ကိုယျဝနျရှိတာကိုပငျ ထှကျပေါကျ ရသှားသလို ဖွဈနသေညျ။ သူ့ညီမ ခငျမာရီကား တငျမာရီနှငျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျလို ဖွဈနသေညျ။ သူလိုအပျနသေညျ့ အရာအားလုံး ခငျမာရီဆီက ရနသေညျ။ ခငျမာရီက သူ့နှငျ့ ဒီကိစ်စ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိသညျ။ ဒီကိစ်စ ဒီလောကျကောငျးမှနျး သူ အခုမှ သိသညျဟု သူ့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောသလို၊ သူလိုခငျြသညျကိုလဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးတောငျးတတျသညျ၊ ကိုရဲနောငျကိုလဲ လိုခငျြသညျကိုလညျး လိုလိုလားလားဖွညျ့ပေးသညျ။
တခွားအိမျမှု့ကိစ်စကတော့ ရှပျပွာပွာ ဖွငျ့ အခြိုးမကြ။ မီးပူတောငျ ဖွောငျ့တနျးအောငျ တိုကျတတျသူ မဟုတျ၊ ကိုရဲနောငျကား သူတို့ ညီအမ နှဈယောကျ ပေါငျးမှ ပွညျ့စုံသလို ဖွဈနတေော့သညျ။ ကိုရဲနောငျ ဘာလုပျရမှနျး မသိတော့။ ခငျမာရီကို မခှဲနိုငျသလို တငျမာရီကိုလညျး မပွဈနိုငျ။ ဒီပုံနှငျ့ သူနှငျ့ ခငျမာရီ ကိစ်စ သိပျမကွာခငျ တငျမာရီ သိမှာ သူသိနသေညျ။ သူတို့ နှဈယောကျကလညျး လှနျကိုလှနျသညျ။ စားကောငျးတိုငျး စားနကွေညျမှာ နစေ့ဉျ ရကျဆကျ ဖွဈနသေညျ။ တငျမာရီ သိလြှငျ ကိုရဲနောငျ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမညျကို မသိတော့။ ဒီကိစ်စ ခငျမာရီ နှငျ့ စကားစမိတိုငျး ယောကျဖနျော နငျရှငျး။
ငါ နငျ့ကို မခှဲနိုငျတော့ဘူး ဟု ငိုသံကွီးနှငျ့ အမွဲပွောသညျ။ သူ ခငျမာရီကိုလညျး သနားသညျ။ ဘာမှ မသိသညျ့ ခငျမာရီကို သူက စထားသညျမို့ သဈစိမျးခြိုး မခြိုးခငျြ။ ကိုရဲနောငျ ဘာလုပျမှနျး မသိတော့။ ထိုကိစ်စ ခေါငျးထဲရောကျလာသညျနှငျ့ ကိုရဲနောငျ အိပျမပြျောတော့၊ အိပျမပြျောတော့ အနားတှငျ အိပျပြျောနသေညျ့ ခငျမာရီကို လှမျးဖကျလိုကျသညျ။ ခငျမာရီက အငျး ကနဲ့ အသံပွုကာ သူ့ကို ပွနျဖကျရငျး ခွထေောကျကပါ သူ့ကို ခှလိုကျသညျ။ ထိုကဲ့သို့ အပွုအမူမြိုး တငျမာရီထံမှ သူတခါမှ မရဘူးခြေ။ ခငျမာရီကား သူ့အတှကျ မရှိလြှငျ မဖွဈသလို တငျမာရီကလညျး သူ့အတှကျ မရှိလြှငျ မဖွဈ ….ပွီးပါပွီ။
နင်ကလဲ မောနေပြီလား၊ လုပ်ပါအုံးဟ၊ ငါဒီမှာကောင်းတုန်း” လုပ်နေရင်း တန်းလမ်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ပိကျလာသော ကိုရဲနောင်ကို လှမ်းဖက်ရင်း ခင်မာရီကပြောလိုက်သည်။ ခု နောက်ပိုင်း ခင်မာရီ နှင့် သူ ဒီကိစ္စ အပေးအယူ တည့်နေသည်။ သူ့ မိန်းမနှင့် လားလားမှ မတူ။ ခင်မာရီက ဒီကိစ္စ စိတ်ပါသည်။ သူနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိသည်။ ဒါကို ကိုရဲနောင်ကလဲ ကြိုက်သည်။ သူ့ မိန်းမဆီက မရသည့် အရာကို ခင်မာရီဆီမှ အပြည့်အဝ ရနေသည်။ “မောတယ်ဟ၊ ငါဒီမှာ မနားတမ်းလုပ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ သေရောပေါ့၊ ခန နားအုံးမယ်ဟာ၊ နင်မစောင့်နိုင်ရင် ငါ့ အပေါ်က တက်လုပ်” ကိုရဲနောင်က ပြန်ပြောသည့် လေသံကိုက မောသံပေါက်နေသည်။ မမောခံနိုင်ရိုးလား၊ အောက်က ဇိမ်ယူနေသည့် ခင်မာရီက တအအ နဲ့ ကောင်းလိုက်တာ လုပ်လုပ် ဆိုပြီး သူကောင်းနေတိုင်း အားမနာတမ်း လုပ်ခိုင်းနေတာမို့ ကိုရဲနောင်က မနားတမ်းဆက်တိုက်ဆော်နေရာမှ မတတ်နိုင်တော့။ ကိုရဲနောင်က သူ ချက်ခြင်း မပြီးနိုင်မှန်း သူ့ကိုယ်သူ သိသည်။ စောစောက ခင်မာရီ အစုတ်ကောင်းသဖြင့် သူ့ ပါးစပ်အောက်မှာ တချီ ပြီးထားပြီးပြီမို့ ခု တချီ အချိန်ကြာမယ်မှန်း သူ့ကိုယ်သူ သိနေသည်။
“ဟာ နင့်အပေါ်က မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ ငါက အောက်က ခံရတာ ပိုကြိုက်တယ်၊ နင့်အပေါ်တက်လုပ်တာ ငါ့ခြေထောက်ညောင်းတယ်” “ကဲ အပေါ်က မလုပ်ချင်ရင် ကုန်းပေး၊ ငါနောက်ကနေ လုပ်ပေးမယ်၊ ဒါဆို ငါ သိပ်မမောဘူး” “အာ ယောက်ဖကလဲ ငါက အောက်က ဇိမ်နဲ့ ခံချင်နေပါတယ်ဆိုမှ လာပြောနေတယ်။ မနေ့က နင့် အကြိုက် အကုန် ငါလုပ်ပေး ပြီးပြီ၊ ဒီနေ့ နင့် အလှည့်” “အေး ဒါဆို ငါ ခန နားအုံးမယ်။ ငါလဲ မောတာပေါ့ဟ၊ ငါသိတယ် နင်စောစောက ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်နဲ့ တခါပြီးသွားသေးတယ်မို့လား” “အင်း၊ ပြီးပေမဲ့ ခံလို့ မဝသေးဘူးဟာ၊ ပြီးတော့ နင်က ဆက်လုပ်နေတာနဲ့ ပြန်တက်လာတာ ခုကောင်းနေတုန်း ရှိသေးတယ် နင်က ရပ်လိုက်တာ၊ ဖီးတောင်အောင့်သွားတယ်” “ဖီးလ် မအောင့်အောင် ငါ့ ဟာ သွင်းထားတာဘဲ၊ နင်ငါ့ကို သေချာ ခွထားလေ” “ခွထားတာဘဲ”
“ကော့ပြီး နင့်ခြေထောက်နဲ့ ငါ့ကို သေချာညှပ်ထားလေ နင့်ဟာနဲ့ ငါ့ဟာ ကပ်နေအောင်ညှပ်” ကိုရဲနောင်အပြောကြောင့် ခင်မာရီက ကော့ရင်း သူ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို သေချာတင်းနေအောင် ကိုရဲနောင် ခါးကို ညှပ်လိုက်သည်။ ဒီတော့မှ သိသိသာသာ ကိုရဲနောင်ပစ္စည်းက ခင်မာရီ ကိုယ်ထဲ တိုးဝင်သွားသလို ဖြစ်သွားသည်မို့ “ဟား . . . ကောင်းလိုက်တာ ယောက်ဖရာ၊ ခုမှ အတွင်းကို သေချာထိတယ်၊ အဲလို အစကပြောပါလား၊ နင်လဲ နဲနဲဖိချပေး” “ပြောစရာလိုလားဟ၊ နင်သိရမှာပေါ့။ ကဲ ကဲ ဒီလောက်ဘဲ ဖိလို့ရမယ်၊ နင်လဲအတင်းကော့လေ” အပေးအယူမျှမျှနှင့် ကိုရဲနောင်က ဖိ၊ ခင်မာရီကကော့ခံကာ အားကုန်ဖက်ရင်း နှစ်ယောက်သား ခနမျှ တိတ်သွားသည်။ ခနကြာတော့မှ ခင်မာရီက တအားကုန်ဖက်ထားသည်ကို လျှော့ချရင်း သက်မချကာ “ဟူး . . ငါတော့ ဒုက္ခပါဘဲ ယောက်ဖရာ၊ နင်မကောင်းဘူး” “ဟ ငါက ဘာမကောင်းတာလဲ” “နင်လဲမကောင်းဘူး၊ ငါလဲ မကောင်းဘူး။
စားကောင်းတိုင်း စားနေကြတာ” “စားကောင်းလို့ စားတာ မကောင်းစရာလားဟ၊ ကဲ ငါ အမောပြေပြီ၊ အလုပ်ပြန်စမယ်” “ငါ ကြေနပ်နေပြီဟ၊ နင် နားချင် ခန ထပ်နားအုံးလေ” “မနားတော့ဘူး၊ ဒီထက်ပိုနားရင် ငါ့ဟာပျော့သွားတော့မယ်” ကိုရဲနောင်က ပြန်ပြောရင်း ခင်မာရီ ကိုယ်ပေါ်မှ ထကာ ပေါင်ကြားထဲ ကျကျနန ဝင်ထိုင်လိုက်သည်၊ ခင်မာရီက ပေါင်ကို ကားပေးရင်း ခြေထောက်ကို မြှောက်ကာ သူ့ခြေထောက်ကို ကိုရဲနောင် ပခုံးပေါ် လှမ်းတင်လိုက်သည်။ ကိုရဲနောင်ကလဲ အလိုက်သင့် ခင်မာရီ ပေါင်ကို လှမ်းဆွဲကာ စောစောက အထမှာ ပလွတ်ကနဲ ကျွတ်သွားသော သူ့ ပစ္စည်းကို လက်ဖြင့်ထိမ်းကာ စိုရွဲနေသော ခင်မာရီ ကိုယ်ထဲ ရှလွတ်ကနဲ ပြန်ထိုးထည့်ရင်း အစမ်း တချက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးစမ်းဆောင့်ကြည့်လိုက်သည်။
“အ” ခင်မာရီထံမှ အ ကနဲ အသံတချက်ထွက်လာသည်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း “ကောင်းလား” ခင်မာရီက ပြန်မဖြေဘဲ သူ့ပေါင်ကို ဆွဲထားသော ကိုရဲနောင် လက်ကို လှမ်းရိုက်သည်။ ကိုရဲနောင်က ပြုံးရင်း ကျွတ်သွားအောင် ဆွဲထုတ်လိုက်၊ ဇွပ်ကနဲ ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်နဲ့ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်ကစားနေသည်။ ဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း ခင်မာရီ က တအအ ဖြင့် ဖြစ်နေသဖြင့် “ကောင်းလားဆို” ကိုရဲနောင်က ထပ်မေးလိုက်သည်။ ဒီတော့မှ ခင်မာရီက လေသံတိုးတိုးဖြင့် “ကောင်းလွန်းလို့ ခက်နေပြီ ယောက်ဖရာ၊ လုပ်ပါဟာ၊ နင်ကလဲ ငါကောင်းနေပြီဆို ဒီလိုဘဲ” ခင်မာရီ အပြောက ထန်စရာမို့ ကိုရဲနောင် မထိမ်းနိုင်တော့။
တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဂွေးရိုက်သံ ဆက်တိုက်ပေါ်လာသလို ခင်မာရီဆီမှလည်း တအအ နှင့် အ သံဆက်တိုက်ထွက်လာလေတော့သည်။ ကိုရဲနောင် အိမ်ထောင်သက်တမ်းက ၂ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကျစကတည်းက သူ့ မိန်းမ တင်မာရီက ဒီကိစ္စကို စိတ်မပါသလို တက်တက်ကြွကြွလည်း မရှိ။ ချစ်သူရီးစားဖြစ်ကာ ယူထားသည် မဟုတ်ဘဲ၊ လူကြီးချင်း သဘောတူကာ ပေးစားထားသဖြင့် သူ့မိန်းမ ရှက်နေသည်ဟုသာ အစက အောက်မေ့မိသည်။ တစတစ နှင့် ကြာလာသော်လည်း တင်မာရီက က ထူးမလာချေ။ ကိုရဲနောင်က သူ့မိန်းမလည်း သူ့လို ဒီကိစ္စတွင် တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်စေချင်သည်။ ကိုရဲနောင်က မိန်းမပွေသူ မဟုတ်သော်လည်း ထိုကိစ္စတွင် ယူထားသည့် မိန်းမ နှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်စေချင်သည်။
ယခု တင်မာရီက ထိုသို့ မဟုတ်၊ ထိုကိစ္စကလွဲပြီး ကျန် အိမ်မွု့ကိစ္စ အားလုံး နိုင်နင်းသည်။ သူ့ ဝေယျာဝစ္စ မှန်သမျှ လိုလေသေးမရှိ။ ကိုရဲနောင်ကလဲ ထိုကိစ္စ သူ့မိန်းမ စိတ်ပါလာအောင် အမျိုးမျိုး ဆွဲဆောင်သည်။ သို့သော် ညဘက် သူအနားကပ်ကာ သူ့မိန်းမ ကို ဖက်လိုက်သည်နှင့် တင်မာရီ ခန္တာကိုယ်က တောင့်တင်းနေလေပြီ။ ကိုရဲနောင် အနမ်းကို မျက်စိစုံမှိတ်ကာ ခံသည်။ ကိုရဲနောင် ပြုသမျှ အံကျိတ်ကာ ခံသည်။ တုန့်ပြန်မွု့ဆိုသည်မှာ ဝေလာဝေး။ ကိုရဲနောင်က အတတ်နိုင်ဆုံး သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို သုံးကာ တင်မာရီကို စည်းလုံးသည် မရ။
လက်မထပ်ခင်က တင်မာရီတွင် ချစ်သူရီးစား ရှိခဲ့ကာ သူ့ကို လက်မခံချင်ဟု ထင်မိကာ နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းသည်။ တင်မာရီတွင် မည်သည့် ယောက်ကျား အတွေ့အကြုံမျှ မရှိ။ မည်သည့် အတွက်ကြောင့် တင်မာရီ ဒီကိစ္စကို စိတ်မဝင်စားသည်ကို ကိုရဲနောင် နားမလည်သလို ဖြစ်နေသည်။ တင်မာရီ ပုံစံကား ခု ကိုယ်ဝန်ရှိတာကိုပင် ထွက်ပေါက် ရသွားသလို ဖြစ်နေသည်။ သူ့ညီမ ခင်မာရီကား တင်မာရီနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လို ဖြစ်နေသည်။ သူလိုအပ်နေသည့် အရာအားလုံး ခင်မာရီဆီက ရနေသည်။ ခင်မာရီက သူ့နှင့် ဒီကိစ္စ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်။ ဒီကိစ္စ ဒီလောက်ကောင်းမှန်း သူ အခုမှ သိသည်ဟု သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောသလို၊ သူလိုချင်သည်ကိုလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတောင်းတတ်သည်၊ ကိုရဲနောင်ကိုလဲ လိုချင်သည်ကိုလည်း လိုလိုလားလားဖြည့်ပေးသည်။
တခြားအိမ်မွု့ကိစ္စကတော့ ရှပ်ပြာပြာ ဖြင့် အချိုးမကျ။ မီးပူတောင် ဖြောင့်တန်းအောင် တိုက်တတ်သူ မဟုတ်၊ ကိုရဲနောင်ကား သူတို့ ညီအမ နှစ်ယောက် ပေါင်းမှ ပြည့်စုံသလို ဖြစ်နေတော့သည်။ ကိုရဲနောင် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့။ ခင်မာရီကို မခွဲနိုင်သလို တင်မာရီကိုလည်း မပြစ်နိုင်။ ဒီပုံနှင့် သူနှင့် ခင်မာရီ ကိစ္စ သိပ်မကြာခင် တင်မာရီ သိမှာ သူသိနေသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကလည်း လွန်ကိုလွန်သည်။ စားကောင်းတိုင်း စားနေကြည်မှာ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ဖြစ်နေသည်။ တင်မာရီ သိလျှင် ကိုရဲနောင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမည်ကို မသိတော့။ ဒီကိစ္စ ခင်မာရီ နှင့် စကားစမိတိုင်း ယောက်ဖနော် နင်ရှင်း။
ငါ နင့်ကို မခွဲနိုင်တော့ဘူး ဟု ငိုသံကြီးနှင့် အမြဲပြောသည်။ သူ ခင်မာရီကိုလည်း သနားသည်။ ဘာမှ မသိသည့် ခင်မာရီကို သူက စထားသည်မို့ သစ်စိမ်းချိုး မချိုးချင်။ ကိုရဲနောင် ဘာလုပ်မှန်း မသိတော့။ ထိုကိစ္စ ခေါင်းထဲရောက်လာသည်နှင့် ကိုရဲနောင် အိပ်မပျော်တော့၊ အိပ်မပျော်တော့ အနားတွင် အိပ်ပျော်နေသည့် ခင်မာရီကို လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ ခင်မာရီက အင်း ကနဲ့ အသံပြုကာ သူ့ကို ပြန်ဖက်ရင်း ခြေထောက်ကပါ သူ့ကို ခွလိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အပြုအမူမျိုး တင်မာရီထံမှ သူတခါမှ မရဘူးချေ။ ခင်မာရီကား သူ့အတွက် မရှိလျှင် မဖြစ်သလို တင်မာရီကလည်း သူ့အတွက် မရှိလျှင် မဖြစ် ….ပြီးပါပြီ။